Sii deynta warbixinada Waaxda Arrimaha Dibedda ee Xuquuqda Aadanaha 2021
Warbixinta cusub ee dhawaan lasii daayay ee ay Waaxda Arrimaha Dibadda uga warbixisay xaaladda Xuquuqda Aadanaha ee caalamka ayaa muujisay, in wali ay sii socoto caburinta iyo kali-talisnimada qeybo badan oo ka mid ah dunida, taasoo saameyn xun ku yeelatay nolosha iyo xuquuqda aadanaha dad badan. "Meelo yar ayaa cawaaqibka bini'aadamka ee hoos u dhacan uu ahaa mid aad u adag sida dagaalka arxan darada ah ee ay dawladda Ruushka ku heyso Ukraine," ayuu yiri Xoghayaha Wasaaradda Arrimaha Dibadda Mareykanka Antony Blinken oo ka hadlay warbixinta sannadlaha ah.
Taasi waxaa si gaar ah lagu rumeysan karaa, todobaadyadi dhawaa marki ay ciidamada arxan-laawayaasha Kremlin-ka dib looga riixay magaalooyinki ay qabsadeen iyo meelihi kale ee isu dhiibay, waxaa soo ifbaxay caddeymo badan oo muujiyay xadgudubyo badan oo ka dhan ah rayidka: “Waxaan aragnaa waxa duufaantani dhaceysa ay ka tageyso, taasoo ay ku jiraan meydad gacmaha ka xiran oo waddooyinka looga tagay, tiyaatarro, bosteejooyin tareen iyo guryo ay ku noolaayeen rayid oo dhulka lala simay. Waxaan ku maqalnay marqaatiyaal ay bixiyeen dumar iyo gabdho in la kufsaday, halka dad rayid ah oo la go’doomiyay gaajo lagu dilay qaarkoodna ay u dhinteen qaboow.
Laakin Ukraine oo kaliyah ma ahan meelaha ay ka dhaceen tacaddiyada iyo cabburinta. Wasiirka Arrimaha Dibadda Mareykanka ayaa sheegay in ay soo bateen dowladaha meelaha ka baxsan xuduudahooda ku weeraraya kuwa iyaga cambaareeya:
“Sannadkii u dambeeyay oo keliya, saraakiisha sirdoonka Iran waxay qorsheeyeen inay gabadh u dhalatay Mareykanka balse asal ahaan kasoo jeedda Iranay ka afduubaan magaalada Brooklyn ee dalkan Mareykanka, nidaamka Asad wuxuu u hanjabay dad Suuriyaan ah oo dowladda Jarmalka la kaashanayay maxkamadeynta mas’uuliyiin hore oo Suuriyaan ah oo loo heysto danbiyo dagaal, nidaamka Lukashenka ee Belarus wuxuu si qasab ah u weeciyey duulimaad caalami ahaa si uu u xiro wariye madax-bannaan oo diyaaraddaasi la socday."
Dowladaha waxay xabsiyada dhigayaan qaar badan oo dalalkooda ku sugan oo mucaarad ku ah xukuumadahooda. Maanta, in ka badan hal milyan oo siyaasiyiin ah ayaa ku jira xabsiyada ilaa 65 waddan.
Dowladda Shiinaha waxay wali sii waddaa in ay xasuuq iyo tacaddiyo kale u geysato dadka muslimka ah ee laga tirada badanyahay ee gobolka Xinjiang. Dadka Uyguurka iyo kuwa kale ee laga tirada badanyahay ee Hong Kong iyo Tiber ayay dowladdu ku tumaneysaa xuquuqdooda aas-aasiga ah iyada oo qaadeysa caburin nidaamsan.
Afgaanistaan, la wareegidda Taliban waxay soo dedejisay dhibaato bini'aadantinimo, siyaasadahoodana waxay si weyn u wiiqeen xuquuqul insaanka dhammaan Afgaanistaan, gaar ahaan haweenka iyo gabdhaha.
Itoobiya, dhammaan dhinacyada isku haya dalka, oo ay ku jiraan ciidamada Eritrea, waxay ka geysteen xasuuq.
Xuquuqul insaanku waa caalami. "Dadka dhalasho kasta, jinsiyad kasta, qowmiyad, naafo iyo da kasta ha ahaayeen, waxay xaq u leeyihiin xuquuqdooda iyada oo aan loo eegin waxa ay aaminsan yihiin, cidda ay jecel yihiin, ama sifooyin kale," ayuu yiri Xoghaye Blinken. Taasi waa sababta Maraykanku uu usii wadi doono la xisaabtanka wadamada ku xad-gudbida xuquuqul insaanka isla markaana wiiqa mabaadi'da dimoqraadiyadda.